राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य शिविर–विशेषज्ञले भने – मृगौला फेल हुने मुख्य कारण सुगर – जागरण अनलाइन
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य शिविर–विशेषज्ञले भने – मृगौला फेल हुने मुख्य कारण सुगर
२०७५ आश्विन २२, सोमबार २२:४८ मा प्रकाशित
घो राही । ‘मृगौ लासम्बन्धी समस् या भएकाले केही सो ध्नुछ भने भन्नुस्, डाक्टर सावले जवाफ दिनुहुने छ’– रो टरी क्लव अफ दाङका सनत श्रे ष्ठले माइकबाट आव्हान गरिरहनुभएको थियो  । कुर्सीमा बसे का कसै ले पनि लामो समयसम्म हात उठाएन । दुईजना डाक्टरहरु जवाफ दिन अगाडि तयार हुनुहुन्थ्यो  ।
त्यसपछि डाक्टरहरुले पालै पालो आफ्ना भनाइ राख्नुभयो  । सबै स् थानका शिविरहहरुमा सचे तनाका कार्यक्रम चलाउदै आएको मृगौ ला रो ग विशे षज्ञ डा. कल्पना श्रे ष्ठको भनाइ थियो  । उहाका अनुसार मृगौ ला फे ल हुने मुख्य कारण सुगर हो  । सुगरका बिरामीहरु करीव ५० प्रतिशतको मृगौ ला फे ल भएको हुन्छ । सुगर भएकाले नियन्त्रण गराउन नियमित औ षधि खानुपर्छ ।
‘को ही सुगर रो गी छ ?’ डाक्टरको पहिलो प्रश्न थियो  । त्यसमा तीन चारजनाले हात उठाएर भएको संके त गरे  । ‘को ही प्रे सरको रो गी छ ?’– डा. श्रे ष्ठले अकोर् प्रश्न सो ध्नुभयो  । त्यसमा पनि त्यतिजनाले हात उठाए ।
औ षधि खानुभन्दा रो ग लाग्नबाटै जो गिनुपर्छ । डाक्टरहरुको भनाइ थियो  । पहिलो कुरा मृगौ ला के हो भन्ने जान्नुपर्छ । मृगौ लाले रगतको शुद्धिकरण गर्छ । काम नलाग्ने तत्व टक्सिन पिसाव हु“दै फाल्छ र ब्लडप्रे सर बढ्न दिन्न । हाम्रो पिठ्यूतिर ढाडमा सिमी आकारका दुईवटा दाना हुन्छन् । त्यसै लाई मृगौला भनिन्छ । यसरी सरल तरीकाले मृगौलाको परिभाषा दिनुभयो  ।
रक्त अल्पता, सुन्निने , वाकवाकी लाग्ने जस् ता लक्षण दे खिएपछि मृगौ ला फे ल भएको हुन सक्छ । त्यसै ले छ महिनामा एकपटक जाच गराउनुपर्छ । विरामी भएर थलिएपछि मात्रै अस् पताल जाने हो इन । नियमित जाच गराउने हो भने उपचारका लागि काठमाडांै पनि धाउनुपदैर् न ।
‘मृगौ ला पूर्णरुपमा नबिग्रिएसम्म कुनै पनि लक्षण नदे खिन सक्छ’– अर्का डाक्टर लुसन सिंहले भन्नुभयो – ‘मलाई के ही भएको छै न भनरे हाइसुक्क बस् नुहुन्न । समय–समयमा जाच गराउनुपर्छ ।’
उहा“हरुका अनुसार जब खानपिनमा मन नलाग्ने , हलचल गनेर् सक्रियता नआउने , आलस् य हुने जस् ता समस् या देखिन्छन् मृगौ ला खराब भएको शंका गर्न सकिन्छ । त्यस् तो कुरा बिरामी जा“च गर्दा पुष्टि भएको छ । उहाहरुका अनुसार सामान्यतः रगत जा“च गर्दा मृगौ लाको अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ । मृगौ ला ड्यामे ज भएको मात्रै थाहा हुन सक्छ । कुनै लक्षण नदे खिई एकै चो टि ड्यामे ज हुन सक्छ । यति भने र व्याख्या गरे पनि सहभागीहरु शान्त दे खिए ।
त्यसपछि प्रश्न गनेर् पालो तपाइहरुको भने र खुला गरियो  । विमला नाम बताउने महिलाले प्रे सर अति लो हुने समस् या सुनाउनुभयो  । त्यसको जवाफ मा डाक्टर कल्पनाले प्रशस्त गे डागुडीको झो ल, पानी खाएपछि ठीक हुने जवाफ दिनुभयो  ।
लामो समयदे खिकै हो भने मुटुको समस्या रहन सक्ने डाक्टरको भनाइ थियो  । तुरुन्तै जा“च गराउन सुझाव दिनुभयो  ।
‘डाइलासिसबाट शुद्धिकरण गरे पछि किड्नी पहिले कै अवस् थामा फर्किने सम्भावना हुन्छ कि हुदै न ?’– एक ज्ये ष्ठ नागरिकले प्रश्न गर्नुभयो – ‘कि बिग्रे को बिग्य्रै हो  । अकोर् फेनैर् पनेर् अवस्था आउछ ?’ उहा“को प्रश्नमा विभिन्न उपाय अवलम्बन गरे र थकित एवं उत्सुक सबै बुझ्न सकिन्थ्यो  ।
‘डाइलासिसबाट मृगौ ला पहिले कै अवस् थामा फर्किने सम्भावना रहन्छ’– डा. श्रे ष्ठले जवाफ दिदै भन्नुभयो – ‘दीर्घरो गका कारणले मृगौ ला फे ल हुने समस् या ल्याएको हो भने पहिले को अवस् थामा नफर्किन सक्छ ।’ सहभागीको अकोर् प्रश्न थियो – ‘मृगौ ला फे ल भएपछि रगत बन्छ कि बन्दै न ?’ त्यसमा डाक्टरहरुले जवाफ दिनुभयो – ‘मृगौ ला फे ल भएपछि रगत बन्ने प्रक्रिया कम हु“दै जान्छ । रक्त अल्पता दे खिन्छ ।’
‘सुगरको औ षधि खान लागे को १२ वर्ष भयो  । कहिले बढ्ने र कहिले घट्ने गर्छ । दे ब्रे अंग दुख्छ के गनेर् ?’ सहभागीको जिज्ञासा थियो  । नियमित औ षधिले नियन्त्रण गर्नु भन्दा अकोर् उपाय नभएको जवाफ दिनुभयो  । मृगौ ला फे ल हुने अवस् था आउन नदिन आग्रह गर्नुभयो  ।
मृगौ लाको समस् या जताततै भयावह दे खिएको मृगौ ला रो ग विशे षज्ञहरुको भनाइ थियो  । उहाहरुका अनुसार ६–६ महिनामा जचाउनुपर्छ । हरे क शिविरमा जनचे तनाका कार्यक्रम चलाउने गरे को डाक्टरहरुको भनाइ थियो  ।
दुईदिने बृहत स् वास् थ्य शिविरपछि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले घो राहीमा अन्त क्र्रियात्मक छलफल गरे र डाक्टरहरुले रो ग लाग्नुभन्दा रो गको बाटो बन्द गनेर् तरीका सिकाउनुभएको थियो  ।
ब्यावसायिक उखु वारीमा रमाउदै डम्बर, २०७५ आश्विन २२, सोमबार २२:४८
महेन्द्र : कलाकर्मीहरुका एक गडफादर २०७५ आश्विन २२, सोमबार २२:४८
दाङमा हवाइ जहाजसहितको ‘ड्रिम पार्क’ २०७५ आश्विन २२, सोमबार २२:४८